नेपालमा ओपो एफ१७ प्रोको बिक्रि आरम्भ - Technology Khabar
» नेपालमा ओपो एफ१७ प्रोको बिक्रि आरम्भ
Technology Khabar १५ आश्विन २०७७, बिहीबार
ओपोले नेपालमा आजबाट एफ१७ प्रोको विक्रि आरम्भ गरेको छ । कम्पनीले देशभर रहेका प्रमुख अफलाईन रिटेल स्टोर्समार्फत स्मार्टफोनको विक्रिखुल्ला गरेको हो।
सेप्टेम्बर २७मा एक अनलाइन लञ्च ईभेन्ट मार्फत ओपोले नेपालका लागि आफ्नो फ्ल्यागशिप मोडल ओपो एफ१७ प्रोका साथमा एन्को डब्ल्यू५१ र ओपो वाट्चेज पनि सार्वजनिक गरेको थियो ।
नेपालमा ओपो एफ१७ प्रोको मूल्य
८ जीबी र्याम र १२८ जीबी सञ्चय क्षमताका साथमा उपलब्ध गरिएको ओपो एफ१७ प्रोको मूल्य नेपालमा रु. ४३ हजार ९ सय ९० तोकिएको छ ।
कम्पनीले स्मार्टफोन म्याजिक ब्ल्यू र म्याट ब्ल्याक गरी दूई आकर्षक रंगमा उपलब्ध गराएको छ ।
फोनका विशेषता बारे संक्षिप्त जानकारी
ओपो एफ१७ प्रोमा ६.४३ ईञ्च सुपर एमोलेड एफएचडी प्लस डिस्प्लेका साथमा १६एमपी प्लस २ एमपी फ्रण्ट क्यामरा सेटअपका लागि डुअल पञ्च-होल कटआउट दिइएको छ । यस स्मार्टफोनको ब्याक प्यानलमा ४ ओटा क्यामरा सेन्सरको ब्यवस्था गरिएको छ । तिनमा ४८ एमपीको प्राइमरी क्यामरा, ८ एमपी अल्ट्रा वाइट, २एमपी म्याक्रो र २एमपी डेप्थ सेन्सर रहेका छन् ।
ओपोकाअनुसार एफ१७ प्रो “सन् २०२०कै स्लिकेस्ट फोन” हो । यसको मोटाई ७.४ एमएम अल्ट्रा-थिन र वजन जम्मा १६४ ग्रामको अल्ट्रा-लाइटवेट बडी छ ।
एफ१७ प्रोमा मिडियाटेक हेलियो पी९५ एआई चिपसेटका साथमा ८ जीबी र्याम र १२८ जीबी सञ्चय क्षमता उपलब्ध गरिएको छ । यसलाई प्रयोगकर्ताले आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसमा रहेको थ्री कार्ड स्लटका माध्यमबाट सञ्चय क्षमतालाई ५१२ जीबी सम्म बढाउन सक्छन् । एफ१७ प्रोको एन्टि ल्यागिङ अल्गोरिदमले मेमोरी एरर उत्पन्न गराउन सक्ने डाटाको पहिचान गरी तिनको सफाइ गर्ने क्षमता राख्छ । यसले गर्दा स्टटर्स र फ्रिज हुने जस्ता समस्या आउन पाउँदैन ।
त्यसैगरी, फोनको प्रदर्शनीमा अझ उत्कृष्टता दिने सोचक साथ यसमा ३०वाट भोक फ्ल्याश चार्ज प्रविधि सुसज्जित ४,००० एमएएच क्षमताको ब्याट्री जडान गरिएको छ । साथै, प्रयोगकर्ताको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिँदै फोनमा ईन-डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर र उपकरण अनलकिङका लागि फेस अनलक प्रविधि पनि उपलब्ध गरिएको छ।
ओपो एफ१७ प्रोमा एण्ड्रोइड १० मा आधारित कलर ओएस ७.२ सञ्चालन प्रणालीको ब्यवस्था गरिएको छ । ओपो१७ प्रो नयाँ कलरओएस भर्जनका साथमा सार्वजनिक हुने पहिलो ब्याट्चका स्मार्टफोन्स मध्यको हुनेछ । प्रयोगकर्ताका जीवनस्तर उकास्न यसमा अझ बढी फञ्शन्सहरु उपलब्ध गराइएको कम्पनीले जनाएको छ ।
प्रकाशित: १५ आश्विन २०७७, बिहीबार
मोबाइल फोन हरायो वा चोरी भयो ? यसरी डिलीट गर्नुस् फोनको डाटा
२० जेष्ठ २०७५, आईतवार
ई-कमर्श जायन्ट अमेजन भारतमा अनलाइन औषधी बेच्दै, औषधी बिक्रेताहरुको चर्को विरोध
३२ श्रावण २०७७, आईतवार
गूगलको नयाँ ट्रान्सक्रिप्शन फिचर, रेक‍र्ड गरेको कुरा स्मार्टफोनको टेक्स्टमा परिवर्तन गर्न सकिने
केएल टावरमा मोबाइलको मेगा मेला, बम्पर उपहारमा मलेसिया र सिंगापुरको टुर
३० भाद्र २०७४, शुक्रबार
फोरजी नेटवर्क जोडिएपछि पनि स्मार्टफोनमा छिटो चल्दैन इन्टरनेट, त्यसोभए अपनाउनुस यो ट्रिक
यी हुन सन् २०२० मा ह्वाट्सएपमा आएका टप ५ फीचरहरु, के तपाईँले पनि प्रयोग गर्नुभयो
तपाईँको फोनबाट नम्बरहरु डिलिट भएर तनाबमा हुनुहुन्छ ? त्यसोभए यसरी गर्नुस् गुगलबाट रिस्टोर
नेपाल क्लियरिङ हाउसलाई ‘नेसनल पेमेन्ट स्वीच’ सञ्चालनको अनुमति
वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्सले पायो ‘डिजिटल अपर्चुनिटी इन्क्लुजन मेरिट’ अवार्ड
निजामती कर्मचारीहरुको सरुवा अब अनलाइन प्रणालीबाट मात्र हुने
शिखर इन्स्योरेन्सको च्याटबट सेवा, इन्स्योरेन्स सेवाहरु भाइबर र फेसबुक मेसेन्जरमा